आर्थिक अभियान:अंक समाचार
तथ्यांकोवाच : बेसारको रू. ३५ अर्बको विश्व बजार
काठमाडौं (अस) । आईटीसी ट्रेडम्यापका अनुसार सन् २०१८ मा विश्वमा करीब रू. ३५ अर्ब बराबरको बेसार (हलेदो) आयात भएको देखिन्छ । विगत ५ वर्षमा बेसारको विश्व आयातमा करीब १६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने विगत २ वर्षमा करीब १५ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ । नेपाल पनि बेसार उत्पादनका लागि उर्वरभूमि मानिन्छ । तर नेपालब...
काष्ठकलाको विश्व बजार : रू १०८ अर्ब नेपालको निर्यात घट्दो
काठमाडौं (अस) । सन् २०१८ मा विश्वमा रू. १०८ अर्ब बराबरको काष्ठकलाका सामान आयात भएको पाइन्छ । विगत ५ वर्षमा यी वस्तुको विश्व आयातमा करीब ४ प्रतिशत र विगत २ वर्षमा करीब ५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । काष्ठकलाका सामानको यति ठूलो विश्व बजार हुँदा हुँदै पनि नेपालले भने गत आर्थिक वर्षमा करीब २ करोड ६७ लाख बर...
तथ्यांकोवाच : विश्वको रू. ५ अर्बको आयात बजारमा नेपाली हातेकागजको सम्भावना
काठमाडौं (अस) । आईटीसी ट्रेडम्यापका अनुसार विश्वमा हातेकागजको आयात रू. ५ अर्बको हाराहारीमा छ । वातावरणमा न्यून प्रभाव पार्ने, रसायनका न्यूनतम प्रयोग, च्यातिने, कुहिने समस्या नरहेको तथा पट्याउँदा धर्सा नपस्ने हुँदा नेपाली हाते कागज अन्य देशका हातेकागजभन्दा अब्बल दर्जाको मानिन्छ । विश्वमा बजार हुँदाहु...
तथ्यांकोवाच : खोटो र टर्पेन्टाइन तेलको रू. ३० अर्बको भारतीय बजारमा निर्यात सम्भावना
काठमाडौं (अस) । विश्वभर खोटो र टर्पेन्टाइन तेलको बजार आकर्षक रहेको छ । आईटीसी टे«डम्यापका अनुसार सन् २०१८ मा विश्वमा यी वस्तुको आयात करीब २०४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै सोही वर्ष करीब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खोटो र टर्पेन्टाइन तेलको आयात भएको छ । जबकि आर्थिक...
तथ्यांकोवाच : धातुको मूर्तिको रू. २२४ अर्बको विश्व आयात बजारमा नेपालको निर्यात सम्भावना
काठमाडौं (अस) । विश्वमा धातुका मूर्तिको आयातमा विगत ५ वर्षमा करीब ३ प्रतिशत र विगत २ वर्षमा १२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने मूर्तिको विगत १० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर पनि करीब ४४ प्रतिशत छ । नेपाल आफ्नै शैलीको मूर्तिकला निर्माणमा विश्वमै प्रख्यात छ । आईटीसीका अनुसार सन् २०१८ मा विश...
तथ्यांकोवाच : मुस्लिम देशहरूमा रू. १७ अर्बको अलैंची निर्यातको सम्भावना
काठमाडौं (अस) । विश्वभर सुकुमेल र अलैंचीको आयात व्यापार करीब रू. ६६ अर्ब बराबर छ, जसमा अलैंचीको हिस्सा मात्रै करीब रू. १७ अर्ब बराबर छ । खाडी लगायत अन्य मुस्लिम देशहरू अलैंचीका प्रमुख आयातकर्ताका रूपमा रहेका छन् । नेपालको करीब ९९ प्रतिशत अलैंची भारतमा निकासी भइरहेको छ । तर खाडी मुलुकमा अलैंची निर्या...
तथ्यांकोवाच : विश्व बजारमा पश्मिनाको माग बढ्दो
काठमाडौं (अस) । सन् २०१८ मा विश्वका विभिन्न देशले रू. १३१ अर्ब बराबरको पश्मिना सलको आयात गरेका छन् । विगत ५ वर्षमा पश्मिनाको विश्व आयातमा करीब ४ प्रतिशत र विगत २ वर्षमा यसको आयातमा करीब २० प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । विश्वको कुल पश्मिना सल निर्यातमा नेपालको स्थान आठौैं छ र हिस्सा करीब १ दशमलव ५ प्...
तथ्यांकोवाच : ९० अर्ब डलरको ऊनी गलैंचाको विश्व बजारमा नेपालको निर्यात सम्भावना
काठमाडौं (अस) । विगत १० वर्षको निर्यात तथ्यांक विश्लेषण गर्दा नेपालको ऊनी गलैंचाको निर्यातमा करीब ७ प्रतिशतको औसत वार्षिक वृद्धि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट विश्वका विभिन्न ६१ ओटा मुुुलुकमा करीब रू. ७ अर्ब ४७ करोड बराबरको ऊनी गलैंचा निर्यात भएको छ । आईटीसीका अनुसार विश्वको ऊनी गलैंचा निर...
तथ्यांकोवाच : फेल्ट निर्यातमा विद्यमान सम्भावनाहरू
विश्वभर फेल्ट उत्पादनको मागमा आकर्षक वृद्धि भइरहेकोे छ । आईटीसीका अनुसार सन् २०१७ को तुलनामा २०१८ मा फेल्टको आयातमा ६ प्रतिशत तथा विगत ५ वर्षमा विश्वको फेल्ट आयातमा करीब १ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । नेपालको फेल्ट निर्यातमा राम्रो अंकको वृद्धि देखिएको छ । विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालको फेल्ट निर्...
तथ्यांकोवाच : साभेल (बेल्चा) उत्पादनमा विद्यमान सम्भावनाहरू
मुलुकमा निर्माणको कार्यमा भइरहेको वृद्धिसँगै साभेल (बेल्चा) को माग पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले रू. ३० करोड बराबरको २ हजार ९३ मेट्रिकटन परिमाणमा साभेल आयात गरेको थियो । विगत ११ वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा साभेलको आयातको औसत वार्षिक वृद्धिदर करीब २० प्रतिशतको ह...